Kuongorora Kwakakwana kweHTML 5 | Martech Zone
Mugovera, January 9, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Ini zvakaitika kune iyi isinganzwisisike mharidzo na M. Jackson Wilkinson paHTML 5 neCSS 3. Iko kutarisisa kwakazara pane kuri kuuya shanduko kuHTML neCascading Style Sheets. Zvakaoma kutenda kuti HTML 4 yapfuura makore gumi zera kare!
Tsigiro yebhurawuza yeHTML 5 ichaenderera ichityaira akawanda uye akawanda mashandiro online Zvinoita semazuva ekutenga nekuisa software kunze kwemidhiya ari kukurumidza kuve chinhu chekare. Iko kugona kwekuvandudza uye kuburitsa zvisingaite dhizaini uye mashandisirwo anozove nyore ... nenguva uye zviwanikwa kudzikira.
Tags: macascading mafashoniCSScss3HTMLhtml5
Unogona Kuda Email Nyanzvi Nyanzvi Kana…